Fitateram-bahoaka maimaim-poana any Luxembourg? Tena hitranga ve izany?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fitateram-bahoaka maimaim-poana any Luxembourg? Tena hitranga ve izany?
Tsy ny fizahan-tany any Luxembourg irery no hikarakara mpitsidika ny fireneny. Maherin'ny 600,000 XNUMX ny olom-pirenena Luxembourg no hanao veloma ny tapakilan'ny bus sy ny fiaran-dalamby any amin'ny fireneny, satria eo an-dàlana ho tonga firenena voalohany tsy misy fahalalahana ny fitateram-bahoaka rehetra.
Luxembourg dia firenena kely eropeana, mpikambana ao amin'ny Vondrona Eropeana ary ampahany amin'ny faritr'i Schengen. Voahodidin'i Belzika, Frantsa ary Alemana ny firenena. Any ambanivohitra ny ankamaroany, miaraka amin'ny ala matevina Ardennes sy valan-javaboary any avaratra, lohasaha feno harambato amin'ny faritra Mullerthal atsinanana ary ny lohasahan'ny renirano Moselle atsimo atsinanana. Ny renivohiny, Luxembourg City, dia malaza amin'ny tanànany antitra voaro mafy, mijanona eo ambonin'ny harambato.
Raha mikasa ny handroso any Luxembourg hanolotra fitateram-bahoaka ampiarahina ara-bola amin'ny volana martsa 2020, ny sendika Syprolux dia mijanona ho mafy orina manoloana ny hetsika.
Miaraka amin'ny solontena 16 fotsiny, ny Syprolux dia iray amin'ireo sendikan'ny mpivarotra kely kokoa, saingy raha ny filazan'ny filohany Mylène Bianchy dia izy ihany koa no 'snappiest' indrindra, hoy ny fanamafisan'ny mpitantana azy tamin'ny fivoriambe iray. Mijoro ny sendika fa manontany tena momba izay tokony hapetraka izy, ary manana adihevitra mafy ny mpikambana ao aminy.
Anisan'ireo fanontaniana napetraka ny tsy fahazoana antoka ny amin'ny fomba hanisana ny saran-dalan'ny sisintany, ary raha hanandrana hiakatra lamasinina ao amin'ny Grand Duchy ireo mpiasa miampita sisin-tany na eo aza ny faritra zaridaina sy zotram-piaramanidina mbola tsy voaorina manerana ny sisin-tany. Tsy mazava ihany koa ny fihetsika tokony hataon'ny mpitondra lamasinina raha sendra olana amin'ny mpanjifa satria tsy azo nalaina ny tapakila. Manontany tena ny sendikan'ny mpiasa raha ny fampijanonana ny fiaran-dalamby sy ny fiandrasana ny fahatongavan'ny polisy no làlana tsara indrindra amin'izany.
Ny iray amin'ireo fanapahan-kevitra noraisina dia ny fangatahana polisy misahana ny fitaterana. Ireo olona tompon'andraikitra ao amin'ny Syprolux dia nanasongadina ihany koa ny olan'ny tsy fisian'ny fiaran-dalamby tena misy hitaterana mpanjifa mihombo. Ny fanontaniana iray dia napetraka tokoa, dia ny hoe avela handefitra amin'ny fiaran-dalamby be loatra ve ireo mpiasan'ny lamasinina?
Ny olana iray hafa dia ny fitombon'ny asa fanamboarana sy ny arabe, izay maro hafa no kasaina hatao mandritra ny dimy taona ho avy. Nanontany i Bianchy hoe ahoana no ahafahan'ireo mpanao politika manamarina ny fampiatoana ny zotram-piaramanidina amin'ireo olona mividy karatra fitsangatsanganana kilasy voalohany, izay mitentina € 660 amin'ny sandam-bola isan-taona raha tsy maintsy mandray bus fanoloana amam-bolana maro izy ireo noho ny lalamby.
Ny sendikan'ny mpiasa dia miahy manokana ny fahasalaman'ny mpiasa. Mipetraka ny fanontaniana raha azo atao ny mitazona ny fepetra fiarovana sy kalitao. Ho fanampin'izany, CFL dia miaina fahasahiranana amin'ny fitadiavana mombamomba mifanaraka amin'ny mpiasa vaovao, izay miteraka tsy fahampian'ny mpiasa amin'ny ankapobeny.
Miara-miasa amin'ny mpanakanto ao an-toerana ny Birao Mpitsidika Guam ho an'ny andian-tsarimihetsika mitohy
Notendren'i Travelodge Pattaya ny Tale Jeneraly vaovao